JW Library App: Tsvaga Zvauri Kuda muBhaibheri Kana Kuti Mune Rimwe Bhuku (Android) | JW.ORG Rubatsiro
Zviri paJW Library
Kana Uchishandisa Android
Tanga Kushandisa JW Library​—Android
Kudhaunirodha uye Kushandisa maBhaibheri​—Android
Kudhaunirodha Uye Kushandisa Mabhuku​—Android
Kumaka Paunenge Uchida Kuzodzoka (maBookmark)​—Android
Unoda Kuti Mashoko Abude Akaita Sei?​—Android
Tsvaga Zvauri Kuda muBhaibheri Kana Kuti Mune Rimwe Bhuku​—Android
Mibvunzo Inonyanya Kubvunzwa​—JW Library (Android)
Kana uchishandisa iPad, iPhone, kana iPod touch
Tanga Kushandisa JW Library​—iOS
Kudhaunirodha Uye Kushandisa maBhaibheri​—iOS
Kudhaunirodha Uye Kushandisa Mabhuku​—iOS
Kumaka Paunenge Uchida Kuzodzoka (maBookmark)​—iOS
Unoda Kuti Mashoko Abude Akaita Sei?​—iOS
Tsvaga Zvauri Kuda muBhaibheri Kana Kuti Mune Rimwe Bhuku​—iOS
Mibvunzo Inonyanya Kubvunzwa​—JW Library (iOS)
Kana uchishandisa Windows 8 kana Windows Phone 8
Tanga Kushandisa JW Library​—Windows
Kudhaunirodha Uye Kushandisa maBhaibheri​—Windows
Kudhaunirodha Uye Kushandisa Mabhuku​—Windows
Kumaka Paunenge Uchida Kuzodzoka (maBookmark)​—Windows
Unoda Kuti Mashoko Abude Akaita Sei?​—Windows
Tsvaga Zvauri Kuda muBhaibheri Kana Kuti Mune Rimwe Bhuku​—Windows
Mibvunzo Inonyanya Kubvunzwa​—JW Library (Windows)
JW Library inoita kuti ukwanise kutsvaga mashoko ari muBhaibheri kana kuti mune rimwewo bhuku.
Mirayiridzo inotevera ichakubatsira:
Kutsvaga Musoro Wenyaya
Unogona kutsvaga mashoko muBhaibheri raunenge uchiverenga.
Paunenge wakavhura Bhaibheri, baya bhatani riri kuratidzwa pano, wonyora mashoko auri kutsvaga. Paunenge uchinyora, panobva mashoko anoda kuti fananei nezvauri kunyora. Baya shoko rauri kuda kana kuti baya Enter kuti uwane zvauri kutsvaga.
Pakanzi Top Verses panobudisa mavhesi anowanzoshandiswa ane mashoko awanyora. Pakanzi All Verses panobudisa mavhesi ose ane mashoko awanyora akarongwa kubva kuna Genesisi zvichingoenda zvakadaro. Pakanzi Articles panoratidza nyaya dzose dzine nemashoko awanyora dziri kwekutanga kweBhaibheri uyewo kumaappendix.
Kana wanyora mashoko akati kuti, baya kabhokisi kakanzi Match Exact Phrase kuti uone pari kuwanika mashoko acho sezvaari.
Unogonawo kutsvaga mashoko auri kuda mubhuku raunenge uchiverenga.
Paunenge wakavhura bhuku racho, baya bhatani reSearch, wonyora mashoko auri kutsvaga. Paunenge uchitaipa, panobva mashoko anoda kuti fananei nezvauri kunyora anokubatsira kuwana zvauri kuda. Baya shoko rauri kuda kana kuti baya Enter kuti uwane zvacho zvauri kutsvaga.
Kana wanyora mashoko akati kuti, baya kabox kakanzi Match Exact Phrase kuti uone pari kuwanika mashoko acho sezvaari.
Kana wakatodhaunirodha bhuku raInsight, unogona kutsvaga chero nyaya yawada iri mubhuku iri. Unokwanisa kuita izvi kunyange paunenge uchiverenga Bhaibheri kana kuti chero rimwe bhuku riri paapp iyi.
Baya bhatani riri kuratidzwa pano, wonyora zvauri kutsvaga. Paunenge uchinyora, panobva zvinhu zvinoenderana nezvauri kunyora zvinowanika mubhuku raInsight. Chibaya mashoko acho kuti uvhure nyaya yacho.
Zvinhu izvi zvakatanga kushanda muna October 2014 paJW Library 1.3.4, inoshanda paAndroid 2.3 zvichikwira. Kana usiri kuzviona, ona mirayiridzo iri papeji rakanzi “Tanga Kushandisa JW Library​—Android,” pasi pemusoro wakanzi Kuti Uwane Zvitsva Zviripo.